Teny tsara indrindra avy amin'i Vladimir Lenin - Victor Mochere
Fotoana famakiana: 12 mn novakiana
Vladimir Ilyich Ulyanov, fantatra kokoa amin'ny solon'anarana hoe Lenin, dia revolisionera Rosiana, mpanao politika ary teorista politika. Izy no lehiben'ny governemanta voalohany sy mpanorina an'i Rosia Sovietika nanomboka tamin'ny 1917 ka hatramin'ny 1924 sy ny Firaisana Sovietika nanomboka tamin'ny 1922 ka hatramin'ny 1924. Teo ambany fitantanan'i Rosia, ary ny Firaisana Sovietika tatỳ aoriana, dia lasa fanjakana sosialista antoko tokana nofehezin'ny Kominista. Fety. Marxista ara-ideolojika, namolavola ampahany amin'ny Marxisma antsoina hoe Leninism.
Lenin dia nandray ny politika sosialista revolisionera taorian'ny famonoana ny rahalahiny tamin'ny 1887. Voaroaka tao amin'ny Anjerimanontolon'ny Imperial Kazan noho ny fandraisana anjara tamin'ny hetsi-panoherana ny governemanta Tsarista ao amin'ny Fanjakana Rosiana, nanokana ny taona nanaraka ny mari-pahaizana momba ny lalàna izy. Nifindra tany Saint-Pétersbourg izy tamin'ny 1893 ary lasa mpikatroka Marxista zokiolona. Nosamborina noho ny fikomiana izy tamin’ny 1897, ary natao sesitany tany Shushenskoye, any Siberia, nandritra ny telo taona, ary nanambady an’i Nadezhda Krupskaya.
Taorian'ny sesitany azy, dia nifindra tany Eoropa Andrefana izy, ary lasa mpahay teoria malaza tao amin'ny Antoko Mpiasa Sosialy Demokratika Rosiana Marxista (RSDLP). Tamin'ny 1903, nandray anjara lehibe tamin'ny fisarahan'ny ideolojika RSDLP izy, nitarika ny antoko Bolshevik hanohitra ny Mensheviks an'i Julius Martov. Taorian'ny Revolisiona tsy nahomby an'i Rosia tamin'ny 1905, dia nanao fampielezan-kevitra izy mba hanovana ny Ady Lehibe Voalohany ho revolisiona proletarianina manerana an'i Eoropa, izay, amin'ny maha-marxista azy, dia nino izy fa hitarika ny fanonganana ny kapitalisma sy ny fanoloana azy amin'ny sosialisma.
Taorian'ny Revolisiona Febroary 1917 nanongana ny Tsar ary nanangana Governemanta vonjimaika, dia niverina tany Rosia izy mba handray anjara lehibe tamin'ny Revolisiona Oktobra izay nanongan'ny Bolsheviks ny fitondrana vaovao. Ny governemanta Bolshevik'i Lenin tamin'ny voalohany dia nizara fahefana tamin'ny Revolisionera Sosialista Havia, sovietika voafidy, ary Antenimieram-panorenana misy antoko maro, na dia tamin'ny taona 1918 aza dia nanana fahefana foibe tao amin'ny Antoko Komonista vaovao.
Ny fitondran'i Lenin dia namerina nizara tany teo amin'ny tantsaha sy ny banky nasionaly ary ny indostria lehibe. Niala tamin'ny Ady Lehibe Voalohany izy io tamin'ny fanaovana sonia fifanarahana manome faritany ho an'ny Fahefana Afovoany, ary nampiroborobo ny revolisiona eran-tany tamin'ny alàlan'ny Kominista Iraisam-pirenena. Nofoanana ny mpanohitra tao anatin'ny fampihorohoroana mena, fampielezan-kevitra feno herisetra nokarakarain'ny sampan-draharaham-piarovam-panjakana; an’aliny no maty na naiditra am-ponja tany amin’ny toby fitanana.
Resin'ny fitondrany ny tafika anti-Bolshevik elatra havanana sy ankavia tamin'ny ady an-trano Rosiana nanomboka tamin'ny 1917 ka hatramin'ny 1922 ary nanara-maso ny ady Poloney-Sovietika tamin'ny 1919-1921. Tamin’ny 1921, i Lenin dia nampirisika ny fitomboana ara-toekarena tamin’ny alalan’ny Politika Ara-toekarena Vaovao (New Economic Policy). Firenena maro tsy Rosiana no nahazo fahaleovan-tena tamin'ny Fanjakana Rosiana taorian'ny 1917, saingy tafaray indray tao amin'ny Firaisana Sovietika vaovao ny telo tamin'ny 1922.
Tsy nahomby ny fahasalamany, maty tany Gorki i Lenin, ary i Joseph Stalin no nandimby azy ho olo-malaza indrindra tao amin'ny governemanta sovietika. Noheverina ho iray amin'ireo olo-malaza indrindra sy nanan-kery indrindra tamin'ny taonjato faha-20, i Lenin no foto-kevitra taorian'ny nahafatesan'ny olona tao amin'ny Firaisana Sovietika mandra-paharavany tamin'ny 1991.
Lasa olo-malaza ara-ideolojika tao ambadiky ny Marxisme-Leninisma izy ary nisy fiantraikany lehibe teo amin'ny hetsika kominista iraisam-pirenena. Olona manan-tantara mampiady hevitra sy mampisara-bazana, i Lenin dia heverin'ny mpanohana azy ho tompondakan'ny sosialisma sy ny sarangan'ny mpiasa. Mandritra izany fotoana izany, ireo mpitsikera an'i Lenin dia miampanga azy ho nanangana didy jadona tsy refesi-mandidy izay nanara-maso ny famonoana faobe sy ny famoretana ara-politika.
Ny sasany amin'ireo teny tsara indrindra avy amin'i Vladimir Lenin dia voatanisa etsy ambany.
"Ny lainga lazaina matetika dia lasa fahamarinana." - Vladimir Lenin
"Ny revolisiona dia azo antoka fa ny zavatra tsy refesi-mandidy indrindra azo atao. Ny revolisiona dia ny fihetsika izay ametrahan'ny ampahany iray amin'ny mponina ny sitrapony amin'ny ampahany hafa amin'ny alalan'ny basy, bayonet ary tafondro, izany hoe fomba tena tsy refesi-mandidy. - Vladimir Lenin
“Tsy azo atao ny revolisiona raha tsy misy toe-javatra revolisionera; Ankoatra izany, tsy ny toe-javatra revolisionera rehetra no mitarika ho amin'ny revolisiona. - Vladimir Lenin
"Amerika dia lasa iray amin'ireo firenena manan-danja indrindra amin'ny halalin'ny lavaka mangitsokitsoka eo anelanelan'ny vitsy an'isa mpanankarena miavonavona izay mihosinkosina amin'ny fahalotoana sy ny haitraitra, ary ireo mpiasa an-tapitrisany izay miaina tsy tapaka eo amin'ny sisin'ny fahantrana." - Vladimir Lenin
“Ho tanjona faratampony, ny hoe 'fandriampahalemana' dia midika fotsiny hoe fifehezana ny tontolo kominista." - Vladimir Lenin
"Ny tsy finoana an'Andriamanitra dia ampahany voajanahary sy tsy azo sarahina amin'ny Marxisma, amin'ny teoria sy fampiharana ny sosialisma siantifika. Ny fandaharantsika dia tsy maintsy ahitana ny fampielezan-kevitra momba ny tsy finoana an’Andriamanitra.” - Vladimir Lenin
"Ny tsy finoana an'Andriamanitra dia ampahany voajanahary sy tsy azo sarahina amin'ny kominisma." - Vladimir Lenin
"Ny demokrasia Bourgeois, na dia fandrosoana ara-tantara lehibe aza raha oharina amin'ny Moyen Âge, dia mitoetra foana, ary eo ambanin'ny kapitalisma dia tsy maintsy mijanona, voafetra, tapaka, diso ary mihatsaravelatsihy, paradisa ho an'ny mpanankarena ary fandrika sy fitaka ho an'ny araraotina, ho an'ny mahantra. .” - Vladimir Lenin
“Fa ny demokrasia dia tsy fetra tsy azo ihodivirana; iray ihany amin’ireo dingana amin’ny fivoarana manomboka amin’ny feodaly mankany amin’ny kapitalisma, ary manomboka amin’ny kapitalisma mankany amin’ny Kominisma.” - Vladimir Lenin
“Amin'ny famotehana ny toekaren'ny tantsaha sy ny fandroahana ny tantsaha hiala ao an-tanàna hankany amin'ny tanàna, miteraka proletariat ny mosary… Fanampin'izany, ny mosary dia mety ary tokony ho anton-javatra mandroso tsy ara-toekarena ihany. Hanery ny tantsaha hisaintsaina ny fototry ny rafitra kapitalista izany, handrava ny finoana ny tsar sy ny tsarisma, ary noho izany dia hanamora ny fandresen'ny revolisiona ny fandresen'ny revolisiona… Amin'ny lafiny ara-psikolojika, ireo resaka rehetra momba ny famahanana ny mosary sy ny sisa rehetra ireo dia taratry ny tena. fihetseham-po mamy mahazatra an'ny intelligentsia. " - Vladimir Lenin
“Mety ho afaka ve ny firenena raha mampahory firenena hafa izy? Tsy afaka izany.” - Vladimir Lenin
“Nitombo ny kapitalisma ka lasa rafitr'izao tontolo izao misy ny famoretana mpanjanaka sy ny fahakendany ara-bola ny ankamaroan'ny mponina eran-tany ataon'ireo firenena ' mandroso' vitsivitsy. Ary io 'fandrobana' io dia zaraina amin'ireo mpandroba eran-tany matanjaka roa na telo mirongo fiadiana (Amerika, Grande-Bretagne, Japon), izay mitaona an'izao tontolo izao ho amin'ny adin'izy ireo momba ny fizarana ny babony." - Vladimir Lenin
"Ny kapitalista dia tsy mahavita fahafoizan-tena mihoatra noho ny fahafahan'ny olona manandratra ny tenany amin'ny fehikibony." - Vladimir Lenin
"Ny kapitalista dia afaka mividy ny tenany amin'ny krizy rehetra, raha mbola manome karama ny mpiasa izy ireo." - Vladimir Lenin
"Ny Kominisma dia ny fahefana sovietika miampy ny famatsiana herinaratra ny firenena iray manontolo." - Vladimir Lenin
“Mivadika ho ampihimamba ny fifaninanana. Ny vokatra dia fandrosoana goavana eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny famokarana. Indrindra indrindra, ny fizotran'ny famoronana ara-teknika sy ny fanatsarana dia lasa sosialy. " - Vladimir Lenin
"Ny heloka bevava dia vokatry ny fihoaram-pefy ara-tsosialy." - Vladimir Lenin
"Ilaina amin'ny sosialisma ny demokrasia." - Vladimir Lenin
“Ny famoizam-po dia mahazatra amin’ireo izay tsy mahatakatra ny anton’ny faharatsiana, tsy mahita lalana hivoahana ary tsy mahay miady. Ny proletariat indostrialy maoderina dia tsy anisan'ny sokajin'ny saranga toy izany. " - Vladimir Lenin
“Ny didy jadona dia fitondrana mifototra mivantana amin'ny hery ary tsy voafehin'ny lalàna rehetra. Ny didy jadona revolisionera an'ny proletariat dia fitondrana azo sy tazonina amin'ny fampiasana herisetra ataon'ny proletariat amin'ny bourgeoisie, fitondrana tsy voafehin'ny lalàna rehetra. - Vladimir Lenin
"Ny fiaraha-monina tsirairay dia misakafo telo amin'ny korontana." - Vladimir Lenin
"Ny fifanakalozam-bola, na ara-drariny na tsy ara-drariny, dia midika foana ary ahitana ny fitondran'ny bourgeoisie." - Vladimir Lenin
"Ny Fasisma dia ny kapitalisma amin'ny fahalòvana." - Vladimir Lenin
"Ny fahalalahana miteny dia fitsarana an-tendrony bourgeois." - Vladimir Lenin
"Ny fahalalahana ao amin'ny fiarahamonina kapitalista dia mijanona ho mitovy amin'ny tany amin'ny repoblika grika fahiny: Fahalalahana ho an'ny tompona andevo." - Vladimir Lenin
"Hiady amin'ny tafika i Alemaina tsy hisy intsony, hanitatra ny tenany amin'ny fisiany i Angletera, ary handany ny tenany tsy hisy intsony i Amerika." - Vladimir Lenin
"Omeo zaza aho mandritra ny 5 taona voalohany amin'ny fiainany dia ho ahy mandrakizay izy." - Vladimir Lenin
“Omeo efa-taona aho hampianatra ny zaza, ary ny voa nafafiko dia tsy hongotana mandrakizay”. - Vladimir Lenin
“Omeo taranaka tanora iray aho, dia hanova izao tontolo izao aho.” - Vladimir Lenin
"Omeo ahy ny zanakao efa-taona, ary amin'ny taranaka iray dia hanangana fanjakana sosialista aho." - Vladimir Lenin
“Omeo anay ny zaza mandritra ny 8 taona dia ho Bolshevik mandrakizay izany.” - Vladimir Lenin
"Izay tsy miasa dia tsy hihinana." - Vladimir Lenin
"Ilay miresaka momba ny 'fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety' izao dia mihemotra ary mampiato ny diantsika mankany amin'ny sosialisma." - Vladimir Lenin
"Ahoana no ahafahanao manao revolisiona tsy misy famonoana?" - Vladimir Lenin
“Tsy mahay mihaino mozika matetika aho. Misy fiantraikany amin'ny ati-dohanao izany, mahatonga anao te hiteny zavatra tsy misy dikany, ary mikapoka ny lohan'ny olona izay afaka mamorona hatsarana toy izany mandritra ny fiainana ao amin'ity helo mahatsiravina ity." - Vladimir Lenin
“Tsy miraharaha izay hanjo an'i Rosia aho. Ho helo miaraka aminy. Izany rehetra izany dia lalana mankany amin'ny Revolisiona Maneran-tany." - Vladimir Lenin
"Raha ilaina ny manome ny famaritana fohy azo atao momba ny imperialisma, dia tokony holazaina fa ny imperialisma dia dingana ampihimamba ny kapitalisma." - Vladimir Lenin
"Teo amin'ny tantaran'ny sosialisma maoderina, trangan-javatra izany, fa ny fifandirana amin'ireo fironana isan-karazany ao anatin'ny hetsika sosialista dia avy amin'ny firenena dia lasa iraisam-pirenena." - Vladimir Lenin
“Tsy azo atao ny maminavina ny fotoana sy ny fivoaran'ny revolisiona. Izy io dia fehezin'ny lalàn'izy ireo manokana na tsy dia misy dikany loatra." - Vladimir Lenin
"Mahafinaritra sy mahasoa kokoa ny mandalo ny 'traikefa momba ny revolisiona' noho ny manoratra momba izany." - Vladimir Lenin
"Ilaina - mangingina sy maika ny fanomanana ny fampihorohoroana." - Vladimir Lenin
"Ilaina indraindray ny mihemotra iray mba handrosoana dingana roa." - Vladimir Lenin
“Marina fa sarobidy ny fahafahana; tena sarobidy ka tsy maintsy hozaraina tsara.” - Vladimir Lenin
"Mazava ho azy fa mora kokoa ny mikiakiaka sy manararaotra ary midradradradra noho ny manandrana mifandray sy manazava." - Vladimir Lenin
"Ny fianarana dia tsy vita raha tsy misy fahadisoana sy faharesena." - Vladimir Lenin
"Ny fitsaboana no vato ifaharan'ny andohalambon'ny sosialisma." - Vladimir Lenin
“Tsy misy fahalalahana ara-politika hahafa-po ny vahoaka noana.” - Vladimir Lenin
"Tsy misy Marxista afaka mandà fa ny tombontsoan'ny sosialisma dia ambony noho ny tombontsoan'ny zon'ny firenena hanapa-kevitra." - Vladimir Lenin
“Tsy misy indrafo ireo fahavalom-bahoaka ireo, fahavalon’ny sosialisma, fahavalon’ny mpiasa! Ady mandra-pahafatiny amin'ny mpanankarena sy ny mpihantona, ireo manam-pahaizana bourgeois; ady amin’ny jiolahy sy ny kamo ary ny mpitabataba!” - Vladimir Lenin
"Amin'ny zavakanto rehetra, ho anay, ny sinema no zava-dehibe indrindra." - Vladimir Lenin
"Ny lehilahy iray manana basy dia afaka mifehy 100 tsy misy iray." - Vladimir Lenin
"Tokony hiezaka foana ny ho mahery fihetsika tahaka ny zava-misy." - Vladimir Lenin
"Iray amin'ireo fepetra fototra ho an'ny fandresen'ny sosialisma ny fiadiana ny mpiasa sy ny fanafoanana ny bourgeoisie (ny saranga antonony)." - Vladimir Lenin
"Ny iray amin'ireo soritr'aretina lehibe indrindra amin'ny revolisiona rehetra dia ny fitomboan'ny isan'ny olon-tsotra liana mavitrika, mahaleo tena ary mahery vaika amin'ny politika." - Vladimir Lenin
"Olona mitam-piadiana ihany no tena fiarovana ny fahalalahan'ny besinimaro." - Vladimir Lenin
"Ny fanafoanana ny fananan'olon-tsotra amin'ny tany sy ny fananganana trano mora sy madio ihany no afaka mamaha ny olana amin'ny trano." - Vladimir Lenin
"Ny pacifisme, ny fitoriana ny fandriam-pahalemana amin'ny ankapobeny, dia iray amin'ireo fomba hamitahana ny sarangan'ny mpiasa." - Vladimir Lenin
“Efa hatramin’izay ny olona ary ho adala foana amin’ny fitaka sy ny famitahana tena eo amin’ny politika.” - Vladimir Lenin
"Ny politika dia manomboka amin'ny toerana misy ny vahoaka, tsy amin'ny toerana misy an'arivony, fa amin'ny toerana an-tapitrisany, dia eo no manomboka ny politika matotra." - Vladimir Lenin
“Tsy azo vinavinaina velively ny revolisiona; tsy azo ambara mialoha izany; tonga ho azy izany. Mirongatra ny revolisiona ary tsy maintsy hirehitra.” - Vladimir Lenin
“Ny sosialisma dia midika fitandremana ny zava-drehetra. Hanana sosialisma ianao raha mandinika ny vy sy ny lamba rehetra.” - Vladimir Lenin
"Indraindray - mila tosika ny tantara." - Vladimir Lenin
"Ny tanjon'ny sosialisma dia tsy ny hanafoanana ny fizarazarana ny olombelona amin'izao fotoana izao amin'ny fanjakana kely sy ny fitokanana ny firenena rehetra, tsy ny hampifanakaiky ny firenena ihany fa ny fampiraisana azy ireo ihany koa." - Vladimir Lenin
"Ny fahaizan'ny mpanao propagandy sy ny mpanakorontana rehetra dia ny fahaizany mahita ny fomba tsara indrindra amin'ny fitaomana ny mpihaino rehetra, amin'ny fanolorana fahamarinana iray voafaritra tsara, amin'ny fomba hahatonga azy io ho maharesy lahatra indrindra, mora levonina, indrindra amin'ny sary, ary ny ankamaroany. tena manaitra.” - Vladimir Lenin
"Ny fomba tsara indrindra hifehezana ny mpanohitra dia ny fitarihana azy." - Vladimir Lenin
"Ny fomba tsara indrindra handravana ny rafitra kapitalista dia ny fanararaotana ny vola." - Vladimir Lenin
“Miala amin’ny hetra amin’ny alalan’ny kolikoly sy amin’ny alalan’ny fifandraisany ny bourgeoisie ankehitriny; tsy maintsy manakatona ny banga rehetra isika.” - Vladimir Lenin
"Hamidin'ny kapitalista anay ny tady hanantonana azy ireo." - Vladimir Lenin
"Ny fananganana banky foibe dia 90% amin'ny fifandraisana amin'ny firenena iray." - Vladimir Lenin
"Ny tanjon'ny sosialisma dia ny kominisma." - Vladimir Lenin
"Ny tantaran'ny firenena rehetra dia mampiseho fa ny sarangan'ny mpiasa irery ihany no afaka mampivelatra ny fahatsiarovan-tena amin'ny sendikà." - Vladimir Lenin
"Arakaraka ny maha demokratika ny rafi-pitantanana ny governemanta, dia ho mazava kokoa amin'ny mpiasa fa tsy ny tsy fahampian'ny zo no fototry ny ratsy, fa ny kapitalisma." - Vladimir Lenin
"Ny zava-dehibe indrindra rehefa marary dia ny tsy hanary fo." - Vladimir Lenin
"Ny hany tsy manao fahadisoana dia izay tsy manao na inona na inona." - Vladimir Lenin
"Ny voageja dia avela indray mandeha isan-taona hanapa-kevitra hoe iza amin'ireo solontenan'ny saranga mpampahory no hisolo tena sy hanery azy ireo ao amin'ny parlemanta." - Vladimir Lenin
“Tsy ny mpanao gazety ihany no tokony ho mpanao propagandy sy mpanentana iombonana, fa mpikarakara iraisan'ny vahoaka ihany koa.” - Vladimir Lenin
"Tsy mila mpahay tantara ny revolisiona." - Vladimir Lenin
"Ny paikady mahomby indrindra amin'ny ady dia ny fanemorana ny asa mandra-pahatongan'ny faharavan'ny fitondran-tenan'ny fahavalo mahatonga ny famelezana mahafaty ho azo atao sy mora." - Vladimir Lenin
"Ny fomba hanorotoroana ny bourgeoisie dia ny fitotoana azy ireo eo anelanelan'ny vato fikosoham-bary sy ny fisondrotry ny vidim-piainana." - Vladimir Lenin
“Am-polony taona maro izay tsy misy zava-mitranga, ary misy herinandro izay am-polony taona maro.” - Vladimir Lenin
“Tsy misy fitondran-tena eo amin’ny politika; ilaina ihany no misy. Mety hahasoa antsika ny olona ratsy fanahy, satria tsy misy dikany izy. - Vladimir Lenin
"Tsy misy zavatra maharikoriko mihoatra noho ny fivavahana." - Vladimir Lenin
"Ity fiovan'ny fifaninanana ho ampihimamba ity dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra - raha tsy ny zava-dehibe indrindra - ny toe-karena kapitalista maoderina." - Vladimir Lenin
"Ireo izay manohitra ny fikomiana mitam-piadiana ... dia tsy maintsy roahina amin'ny fomba tsy an-kiato ho fahavalo, mpamadika ary kanosa." - Vladimir Lenin
"Ny fanalahidin'ny fahombiazana telo: mamaky, mamaky, mamaky." - Vladimir Lenin
"Noho izany, ny taonjato faha-21 dia manamarika ny fiovam-po avy amin'ny kapitalisma taloha mankany amin'ny vaovao, avy amin'ny fanjakazakan'ny renivola amin'ny ankapobeny mankany amin'ny fanjakazakan'ny renivola ara-bola." - Vladimir Lenin
“Miantehitra amin’ny faharesen-dahatra, ny fanoloran-tena, ary ireo toetra tsara ara-panahy hafa; izany dia tsy azo raisina ho zava-dehibe amin’ny politika”. - Vladimir Lenin
"Raha adika amin'ny fitenin'olombelona tsotra dia midika izany fa tonga amin'ny dingana iray ny fivoaran'ny kapitalisma, na dia mbola 'manjaka' aza ny famokarana entam-barotra ary mbola heverina ho fototry ny fiainana ara-toekarena, raha ny tena izy dia efa simba ary ny ankamaroan'ny Ny tombom-barotra dia mankany amin'ireo 'hendry' amin'ny fanodikodinana ara-bola." - Vladimir Lenin
"Tsara ny fahatokisana, fa ny fifehezana no tsara kokoa." - Vladimir Lenin
“Ny fahamarinana no zava-tsarobidy indrindra. Izany no antony tokony hozarainay izany.” - Vladimir Lenin
“Zavatra lehibe sy teny filamatra lehibe ny firaisankina. Fa ny ilain'ny mpiasa dia ny firaisan'ny Marxista, fa tsy ny firaisan'ny Marxista, sy ny mpanohitra sy ny mpanolana ny Marxisme. - Vladimir Lenin
"Tsy azo foanana ny ady raha tsy nofoanana ny saranga ary noforonina ny Sosialisma." - Vladimir Lenin
"Tsy ampy ny tifitra mpampianatra izahay." - Vladimir Lenin
“Mahita seho tena mampianatra sy mahatsikaiky izahay. Ireo mpivaro-tena liberaly bourgeois dia manandrana manarona ny tenany amin'ny toga amin'ny revolisiona." - Vladimir Lenin
"Azontsika atao ary tsy maintsy manoratra amin'ny fiteny izay mamafy fankahalana, fankahalana ary fanesoana amin'ireo izay tsy mitovy hevitra amintsika." - Vladimir Lenin
“Tsy tokony hasehontsika ny sosialisma ho toy ny hoe hitondra izany ho antsika eo amin'ny takelaka miakanjo tsara ny sosialista. Tsy hitranga mihitsy izany. Tsy nisy olana na dia iray aza tamin'ny adin'ny saranga voavaha teo amin'ny tantara afa-tsy tamin'ny herisetra. Rehefa misy herisetra ataon'ny mpiasa, amin'ny hamaroan'ny traboina amin'ny mpanararaotra - dia ho amin'izany izahay!" - Vladimir Lenin
"Mila ny fampihorohoroana tena izy, manerana ny firenena izay mamelona indray ny firenena ary nahazoan'ny Revolisiona Frantsay voninahitra." - Vladimir Lenin
"Isika Social-Democrats dia mijoro ho an'ny demokrasia foana, fa tsy 'amin'ny anaran'ny kapitalisma', fa amin'ny anaran'ny fanadiovana ny lalana ho an'ny hetsikay, izay tsy azo atao raha tsy misy ny fampandrosoana ny kapitalisma." - Vladimir Lenin
“Tiantsika ny hanatratra lamina vaovao sy tsara kokoa eo amin’ny fiaraha-monina: ao anatin’ity fiaraha-monina vaovao sy tsara kokoa ity dia tsy tokony hisy na manankarena na mahantra; tsy maintsy miasa ny rehetra. Tsy vitsy ny mpanankarena fa ny mpiasa rehetra dia tsy maintsy misitraka ny vokatry ny asa iombonana. Ny milina sy ny fanatsarana hafa dia tsy maintsy manamora ny asan'ny rehetra fa tsy mamela ny vitsivitsy hanan-karena amin'ny fandaniana olona an-tapitrisany sy am-polony tapitrisa. Io fiaraha-monina vaovao sy tsara kokoa io dia antsoina hoe fiarahamonina sosialista. - Vladimir Lenin
“Rehefa araraotina ny liberaly, dia hoy izy: 'Misaotra an'Andriamanitra fa tsy nokapohiny aho'. Rehefa nokapohina izy, dia nisaotra an’Andriamanitra izy fa tsy namono azy. Rehefa vonoina izy, dia hisaotra an’Andriamanitra fa nafahana tamin’ny tanimanga mety maty ny fanahiny tsy mety maty.” - Vladimir Lenin
"Rehefa ny fanantonana ny kapitalista dia hifaninana izy ireo mba hivarotra ny tady aminay amin'ny vidiny ambany." - Vladimir Lenin
"Isaky ny ankinina amin'ny mpampianatra ny anton'ny vahoaka dia very izany." - Vladimir Lenin
“Raha mbola misy ny Fanjakana dia tsy misy fahalalahana. Rehefa misy ny fahafahana dia tsy hisy Fanjakana. - Vladimir Lenin
“Nahoana no tokony havela ny fahalalahana miteny sy ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety? Nahoana ny governemanta izay manao izay heveriny ho marina no tokony hanakiana? Tsy hamela ny fanoherana amin’ny alalan’ny fitaovam-piadiana mahafaty izany. Ny hevitra dia zavatra mahafaty kokoa noho ny basy. Nahoana no misy olona avela hividy milina fanontam-pirinty sy hanaparitaka hevitra manimba izay kajy mba hanalana baraka ny fitondrana?” - Vladimir Lenin
"Raha tsy misy ny teoria revolisionera dia tsy misy hetsika revolisionera." - Vladimir Lenin
“Tsy maintsy miasa amin'ny heriny rehetra ianao. Fikarohana faobe. Famonoana noho ny fanafenana fitaovam-piadiana.” - Vladimir Lenin
"Tsy maintsy mirehitra ny fonao ary ny atidohanao amin'ny ranomandry." - Vladimir Lenin
"Mizaha amin'ny bayonet ianao: raha mahita holatra ianao dia atosika. Raha mahita vy ianao dia miala. - Vladimir Lenin
Ny mari-pahaizana ambony indrindra amin'ny oniversite 2022